Hanjabaad kasoo yeertay Al-shabaab iyo sarkaal kashifay nooca ay qaraxyada noqon doonaan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hanjabaad kasoo yeertay Al-shabaab iyo sarkaal kashifay nooca ay qaraxyada noqon doonaan
Xarakada Al-shabaab ayaa soo saartay hanjabaadii ugu cusleyd ebid, kadib markii ay sheegeen in dhawaanahaan ay magaalada Muqdisho ka geysan doonaan qaraxyo aysan weligood magaalada ka sameynin.
Mid ka mid ah saraakiisha Al-shabaab ee u qaabilsan gobolka Banaadir oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal) oo wareysi siiyay idaacadda ku hadasha afka Shabaab ayaa sheegay in maalmaha ay doorashada socdaan ay sii kordhin doonaan weerarada ay inta badan ka fuliyaan magaalada Muqdisho.
Cali Jabal ayaa sidoo kale sheegay inay qorteen shaqaale fir-fircoon oo awood u leh inay ka qeyb qaataan weerarada la xoojiyay ee magaalada Muqdisho, isagoona ku hanjabay in la sii xoojin doono weerarada lagu beegsanayo caddowga waa sida uu hadalka u dhigayee.
“Runtii, marba sidii aad cadowga ku naafeyn karto ama aad kula dagaalami karto ayaa ula dagaalamaysaa, hadii ay maalintii hore ahaayeen qaraxyo intaas ka yar maanta waxay marayaan waxay ka naxsan yihiin oo ay la cajabsan yihiin, intaas iyo kuwa kale oo kasii xoog badan ayaa rajeynaynaa, annaga waxaa naga go’an cadowga dalka jooga, inaan ku weerarno oo aan ka fara-maroojino, meel kasto oo ay dalka kaga sugan yihiin” Sidaas waxaa yiri Cali Jabal.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray sarkaalkaan Al-shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir ayaa imaanaya xilli dhawaanahaan weeraro waaweyn ay Al-shabaab ka geysteen qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, kuwaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dad rayid ah iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya.